Android o umhla wokukhutshwa: nazi iiapos xa zinokuthi zibethe izixhobo ezithandwayo ze-Android
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Umhla wokukhutshwa kwe-Android O: Nazi iiapos xa zinokuthi zibethe izixhobo ezithandwayo ze-Android
Umhla wokukhutshwa kwe-Android O: Nazi iiapos xa zinokuthi zibethe izixhobo ezithandwayo ze-Android
Okwangoku, lulwazi loluntu ukuba i-Android O iza kwisixhobo esikufutshane nawe kungekudala.
Ukuba amava ethu angaphambili ayinto yokudlula, kuphela sisixa esincinci sabasebenzisi be-Android abaya kufumana eyona incasa intsha ye-Android ngomhla woku-1 wokufumaneka koluntu. Abasebenzisi bePixel bayifumana kuqala, ngaphandle kwamathandabuzo malunga noko, kodwa ngubani & apos olandelayo? Ihlala ibonwa.
Kodwa yeyiphi ingxabano malunga noku? Ngaba i-Android O lubaluleke kangaka uhlaziyo kwi-OS konke konke? Elona candelo likhulu, & iiapos malunga nokuzisa ukuphuculwa okungaphantsi kwe-hood ye-OS, kunye nokulungisa iqela lezinto ezibalulekileyo ze-Android ... kwakhona. Izaziso ziba bhetele ngokungcono kunangaphambili, kwaye siya kufumana imenyu yoHlelo oluCwangcisiweyo olufuna ukugcina ucocekile kwaye ucwangcisiwe. Oko & apos; sisampula nje incam yomkhenkce, ke sicebisa ukuba uqhubeke kwaye ujonge imbonakalo yethu ebanzi ye-Android O .
Ukanti, owona mbuzo ubalulekileyo uhleli ...
Iza nini i-Android O?
Masikuncede ngaloo nto-i-ETA yamva nje esinayo kuGoogle kunye neapos; uhlobo olukhulu oluzayo lwe-Androidekuqaleni-ukuya phakathi ku-Agasti 2017.
Ukuva kwamva nje okusuka kumzi-mveliso we-rumor ucebisa ukuba abanini bePixel kufuneka balindele ukuba i-Android O ifike njengohlaziyo lomoya-kwiiveki zokuqala zika-Agasti. Amarhe okuguba nawo abanga ukuba akuyi kuba yi-Preview yonjiniyela, ejikeleza inani lee-betas zikawonke-wonke ukuya kwisithathu. Okwangoku, abaxhamli be-Android abanomdla bayonwabile Uvavanyo lwe-Android O yonjiniyela 3 kwizixhobo ezihambelanayo.
Konke oku kungqamana nonyaka ophelileyo & apos; ngokungalindelekanga kunye nokufika kwangoko kwe-Android Nougat ngo-Agasti 22, 2016, loluphi uhlobo lokumangalisa abanye abazinikeleyo kwi-Android. Kukhangeleka ngathi uGoogle uyawonwabisa umbono wokukhupha i-Android ngaphambili kunesiqhelo ukusukela ngoku, njengakwiminyaka edlulileyo, sasidla ngokufumana i-Android ekuweni kwangoko, ngamanye amaxesha kwifestile ka-Okthobha-kaNovemba.
Inguqulelo ye-Android Umhla wokukhupha
I-Android 4.0 Ice Cream Sandwich Oktobha 18, 2011
I-Android 4.3 Jelly Bean NgoJulayi 9, 2012
Ifowuni ye-Android 4.4 Okthobha 31, 2013
I-Android 5.0 yeLollipop NgoNovemba 12, 2014
I-Android 6.0 Marshmallow Oktobha 5, 2015
I-Android 7.0 Nougat Nge-22 ka-Agasti ka-2016
I-Android 8.0 O Ekuqaleni kuka-Agasti 2017 *
* - Amarhe
Ukanti, omnye umbuzo obalulekileyo uhleli ...
Zeziphi iifowuni eziya kuhlaziywa kwi-Android O kwaye nini?
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Nantsi ilandelayo itheyibhile enolwazi olucingelwayo olusekelwe kumahemuhemu kunye noqikelelo lwangaphambili. Siza kuhlaziya isithuba njengoko ulwazi olutsha luya kubakho.
I-Google Pixel, iPixel XL -Ukuba zizixhobo zikaGoogle kunye neeapos, ezi Pixels zimbini kufuneka ziqale ukufumana i-Android O kwakamsinya nje ukuba iphume ngokusemthethweni.
I-Nexus 6P, i-Nexus 5X -IGoogle & apos; iifowuni zangaphambili ezihamba phambili ziya kuqala ukufumana i-Android O emva kweePixels, kodwa kufanele ukuba iyayiqhuba kakuhle phambi kokuphela konyaka.
I-Google Pixel XL, i-Nexus 6P
Galaxy S8,Galaxy S8 +-Akukho lwazi okwangoku, kodwa ngokwamava ethu adlulileyo, i-Android O kufuneka ikhutshelwe kwiziphatho ezingavulwanga ngoJanuwari-Februwari 2018. Inguqulelo yenethiwekhi ekhethekileyo yeeflegi kufuneka iyifumane ngaxa lithile ngoFebruwari-Matshi 2018.
I-Galaxy Note 8 -I-apos ayinakulindeleka ukuba iNqaku 8 lize ne-Android O ngaphandle kwebhokisi. Ke, iya kuthi ifumane uhlaziyo ngo-2017 & apos; okanye ngeyoMqungu-Februwari 2018 kweyona meko imbi.
Galaxy S7,Umda weGPS S7-Iiflegi zangaphambili zikwindawo yokubuyela umva xa kuziwa kuhlaziyo lwesoftware. Asizukumangaliswa ukuba bahlaziywa kwi-Android O ngo-Matshi-Epreli 2018.
I-Galaxy S6, i-Galaxy S6 Edge, i-Galaxy S6 Edge + -I-Android O iya kuba lolona hlaziyo luphambili lwesoftware kwezi zixhobo zintathu. Inokubabetha ngaxesha lithile ngeNtlakohlaza ka-2018.
I-LG V30 -Akukho & apos; amathuba aphezulu i-LG V30 inokuba phakathi kwefowuni yokuqala ukuthumela nge-Android O ngaphandle kwebhokisi, eyakha kwi-V20 kunyaka ophelileyo, eyayiyifowuni yokuqala ene-Nougat efakwe ngaphambili.
I-LG G6 -LG & apos; iflegi enokubakho iya kufumana i-O ye-Android ukuphela konyaka, mhlawumbi ngo-Novemba-Disemba 2017. Ukuba amava ethu angaphambili ayinto yokuhamba , oku kuyasebenza nakwinguqulelo yenethiwekhi yeflegi.
I-LG V20 -Akuxelwanga ukuba ngaba yiphi indoda ephathekayo inyangwa kwi-Android O, kodwa oku kungenzeka ukuba kwenzeka ngamanye amaxesha ngasekupheleni kuka-2017 / ekuqaleni kuka-2018.
I-LG G5 -Ukubona ukuba i-G5 ifumene i-Android Nougat kuphela phakathi ku-Meyi 2017, abanini bayo kusenokwenzeka ukuba baphambi kokulinda unyaka omnye ngaphambi kokuba bafumane incasa ye-Android O.
I-LG G6, LG V20
I-HTC U11 -I-HTC inomkhwa wokuthembisa ngokuhlaziya iifowuni zayo eziphambili kuhlobo lwamva nje lwe-Android kwiintsuku ezingama-90. Ke, i-HTC U11 ngumgqatswa onokuthi afumane i-Android O ngasekupheleni kuka-2017.
I-HTC 10-Njengokuba ayisiyiyo ifowuni efanelekileyo yeflegi, i-HTC 10 inokuthi ifumane i-Android O kancinci emva kwe-HTC U11. Kwangoko i-2018 yeyona meko imbi kakhulu.
IHTC U11, iHTC 10
I-Sony Xperia XZ yeNkulumbuso-Igama elisesitratweni nguSony & apos; eyona fowuni iphambili iya kufumana i-Android O ngasekupheleni kuka-2017, ngoDisemba.
I-Sony Xperia XZs-Ditto malunga nee-XZs.
I-Xperia XZ yeNkulumbuso, i-Xperia XZs
I-OnePlus 5 -Ieyunithi ze-OnePlus 5 ezikhoyo ziya kuba zisebenzisa i-Android O ngo-2017 kunye nokuphela.
OnePlus 3 / OnePlus 3T -I-CEO ye-OnePlus uPete Lau uthembisile ukuba ezi zimbini ziya kuba ukusebenzisa i-Android O ukuphela kuka-2017 . Masibone ukuba esi sithembiso siza kubamba amanzi.
I-OnePlus 5, i-OnePlus 3T
I-HMD Global ithembisa ukuba zonke iifowuni zeNokia & apos ukuza kuthi ga ngoku-iNokia 3, 5, kunye ne-6- ziya kuthi zihlaziywe kwi-Android O, nelona candelo leendaba zamkelekileyo. Okulusizi kukuba, akukho xesha liqikelelweyo, kwaye xa sinikwe iifowuni zeNokia ezinamandla e-Android ngabantu abatsha abafikayo, asinasizathu sokuqikelela.
I-samsung galaxy note 5 khumbula
I-Logitech ibhengeza imeko ye-iPad Pro yekhibhodi ngexabiso eliphantsi kuneKhibhodi yeMicrosoft
Eyona fowuni zintsha zilindelwe ngo-2021
I-HTC One (M8) vs Google Nexus 5
Nazi iiapos xa Super Mario Run iza kukhutshwa kwi-Android
Imiyalezo kwi-iOS 14 ikhankanywa kwincoko yeqela, iincoko eziphiniweyo
I-Google Pixel XL vs Samsung Galaxy S7 Edge